कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ मासु ? - Samadhan News
कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ मासु ?
समाधान संवाददाता २०७८ असोज २६ गते १०:२५
पाेखरा- दसैँमा प्रायः सबै नेपालीको घरमा मासु प्रसस्त हुन्छ । परापूर्वकालदेखि सिंगै खसी, राँगा, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा काट्ने र मासु सँगालेर खाने हाम्रो चलन छ । दसैँमा काटेको खसी–बोकालाई धेरै दिनसम्म विनाफ्रिजमा राख्दा बिग्रने डर हुन्छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले क्राउनप्लाजा होटेलका सुसेफसोल्टी आरबी बुढाथोकीले दिएको केही टिप्सहरूलाई प्रकाशित गरेको छ ।उनका अनुसार, फ्रिजको चिस्यानमा राखेमा मात्र मासु सुरक्षित रहन्छ । कुनै पनि जन्तुको बधपछि राम्ररी सफा गर्नु जरुरी हुन्छ । शरीरमा भएका रौँहरू राम्ररी सफा गरेर मात्र भित्री भाग खोल्न सुरु गर्नुपर्छ । आन्द्राभुँडी नफुट्ने गरी सर्लक्क निकालेर छुट्टै भाडामा सुरक्षित राखेर राम्ररी सफा गर्नुपर्छ ।
मासुलाई सर्लक्क साँप्रा र अन्य भाग छुट्याएपछि राम्ररी सफा गरेर सुक्खा बनाएर फ्रिजमा राख्नुपर्छ । फ्रिजको तापक्रम घटीमा ३ डिग्री सेल्सियस र बढीमा ५ डिग्री सेल्सियस हुनु जरुरी छ । सकेसम्म धेरै मासु बनाएर नराख्ने ।
फ्रिज नहुनेको हकमा मासुलाई सुक्खा बनाएर कुट्ने र मज्जाले तेलमा भुटेर नुन हालेर पानी सुकाएर हावा आउने ठाउँमा जाली या पातलो कपडाले छोपेर राख्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार अलिअलि पुनः पकाएर खान सकिन्छ । सकेसम्म माछा, कुखुरा खसी–बोका एउटै अचानोमा नकाट्नु राम्रो मानिन्छ ।
माछा–मासु मिसाएर एउटै अचानोमा काट्दा एक–अर्कामा संक्रमण भई ब्याक्टेरिया फैलिने डर हुन्छ । पाकेको मासु र काँचो मासु पनि एउटै अचानोमा काट्नुहुँदैन । काठको अचानोमा काटिएको मासु अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार सुरक्षित मानिँदैन र सफा गर्न पनि सहज हुन्न । सकेसम्मा प्लास्टिकको हार्ड चपिङ बोर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ ।
खुकुरी पनि साबुनपानीले धोएर सुक्खा पारेर सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्छ । मासु भण्डारण गर्दा काँचो मासु र पाकेको मासु सँगै राख्नुहुँदैन । यदि राख्नैपर्ने भएमा राम्ररी छोपेर काँचो मासु तल्लो तह र पाकेको मासु माथिल्लो तहमा राख्नुपर्छ । – काँचो मासुलाई लामो समयसम्म राख्नु छ भने ९१८ डिग्रीदेखि २२ डिग्रीसम्मको चिसो भएको डिप फ्रिजमा छोपेर या पोको पारेर मात्र राख्नुपर्छ ।
कति खाने रु
मासु पकाउँदा राम्ररी पाक्नु अत्यन्त जरुरी छ । एकपटक मासु खाँदा १८० देखि २२० ग्रामसम्म मात्र खानु राम्रो हुन्छ । तीनै छाकमा निरन्तर मासु खाँदा शरीर भारी हुने अल्छी लाग्ने हुन्छ । मासुसँगै सागपात तथा सलाद र शाकाहारी परिकार अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ । रातो मासु मात्र खानुभन्दा कुखुरा, माछा मिलाएर खाँदा शरीरलाई फाइदा गर्छ ।